'Tantara Mampihoron-koditra Amerikana' dia mizara mpampihomehy ary manomboka ny famokarana horonantsary 10
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly 'Tantara Mampihoron-koditra Amerikana' dia mizara mpampihomehy ary manomboka ny famokarana horonantsary 10
by Trey Hilburn III Aogositra 31, 2020
by Trey Hilburn III Aogositra 31, 2020 1,841 hevitra
American Horohoro Story naka ny mpankafy tamin'ny hetsika. Ny andian-tantara mifototra amin'ny anthology dia nidina ny lalan'ny karazana vanim-potoana sivy. Ny tsirairay avy, ny lalana mitarika antsika amin'ireo karazana sokajy manomboka amin'ny 80's slashers ka hatramin'ny mpamosavy sy ny zavatra rehetra eo anelanelany. Toa izao Tantaran'ny horohoro amerikanina nanomboka ny famokarana ny vanim-potoana fahafolo.
Mpamorona, Ryan Murphy dia naka ny Instagram hizara trondro demonia mampatahotra mitady nify miaraka amin'ny hafatra hanavaozana ireo mpankafy.
"Mitovy amin'ny American Horohoro Story Ny Season 10 dia handeha hanombohana ny famokarana amin'ny oktobra (mety). Misaotra an'ireo rehetra miasa mafy mba hanome toky fa azo antoka ny fanombohana ny mpilalao sy ny ekipa. Ary eny, famantarana izany. ” Nanoratra i Murphy.
Tsy mbola misy resaka momba izay lohahevitra hiatrehany ny vanim-potoana fahafolo. Fantatsika fa mety hitranga eny amoron-dranomasina io. Izany zava-misy izany dia mitambatra amin'ireo trondro Antananarivo nify toa an'i Murphy napetraka dia mitarika antsika hino fa amin'ity vanim-potoana manaraka ity dia ho HP Lovecraft sy horohoro anaty rano.
Mazava ho azy fa tombatombana izany. Na izany aza, ny morontsiraka sy ny nify, miaraka amin'ny zava-misy fa lasa fironana tato ho ato ny Lovecraft dia famantarana tsara avokoa.
Ahoana ny hevitrareo lehilahy amin'ny vanim-potoana faha-10 an'ny American Horohoro Story dia ho eo? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.
Mangetaheta horohoro anaty rano bebe kokoa? Kitiho eto.